တကယ့်ကို စိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မိတ်ဆွေကောင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လို
ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် (၁)။ “ဥပကာရ”= ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေ။ ကိုယ်ရဲ့ အပေါင်းအသင်း တစ်
ယောက်ဟာ၊ ဆိုပါစို့... အရက်သေစာ သောက်ပြီး မူးမေ့နေရင်တောင်မှပဲ အမူးပြေသည်အထိ
အောင် သူ့အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ ဟော.. မကောင်းတာ လုပ်တာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:00 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့် အချက်များ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဘုရားရှင်ကို ဘယ်လိုကိုးကွယ်ကြမလဲ။
မိမိအိမ်တွင် ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ကြွရောက်သီတင်းသုံးနေသကဲ့သို့ ကိုးကွယ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာပီသပါမည်။ နံနက်-ညမပျက်ရှိခိုးဝတ်တက်သည့်အပြင် အိမ်မှထွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊
ဘုရားရှင်က သူ့အမေ့အပ်ါမှာ ကျေးဇူးသိတတ်ပုံကို
ဘုရားအလောင်းတော်ကို မွေးဖွားပြီး (၇) ရက်မြောက်မှာ မယ်တော်မဟာမာယာ နတ်ရွာစံသွားပြီး
နတ်ပြည်မှာ သန္တုဿိတအမည်နဲ့ နတ်သားသွားဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၄) ။
“ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ဆုံးမစာ (၃) ”
၂၆။ လှူဖွယ်တန်းဖွယ်၊ ကြီးငယ်တည်တည်
သူ့ခွက်ယောက်ကို၊ မပျောက်နေ့ည ပေးလိုက်ကြ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ အဆုံးအမတွေကို
လိုက်နာကျင့်ကြံရင် အလွန်ကျေးဇူးများပါတယ်။ “ကျနစွာ သင်ပြမပေးတတ်သော ဆရာထံနေမိခြင်း
သည် ထိုဆရာထံ၌ ဓမ္မလမ်းကြောင်း လွှဲချော်နေသဖြင့် အမျိုးညံ့မှာ ပဋိသန္ဓေ နေမိခြင်းနှင့် တူ၏။
စနစ်တကျ ဆိုဆုံးမ သင်ပေးတတ်သော ဆရာ့အထံ၌ နေမိခြင်းကား ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၊ နိဗ္ဗာန်ထိ
မဟာဇနကမင်းကြီး ရသေ့ဝတ်တောထွက်ဖို့ရာတွင် နန်းတော်က သီဝလိဒေ၀ီမိဖုရားကြီးနဲ့ အခြေအရံတွေ၊ စစ်သည်တွေလည်း နောက်က လိုက်သွားကြပါတယ်။ လမ်းခရီးက ရွာတစ်ရွာ
ရောက်တော့ မိန်းကလေးတွေ ဗန်းငယ်၊ ဆန်ကောငယ်တွေနဲ့ ကစားနေကြပါတယ်။ အဲဒီထဲက သွက်လက်ချက်ချာပုံ ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ဆန်ကောထဲမှာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:09 AM No comments:
တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရား အားနာစရာကြီး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ နေအိမ်တိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်များကို တည်
ထားကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ ယင်းသို့ တည်ထားကိုးကွယ်ရာ၌ ကြည်ညိုမှု သဒ္ဓါတရား အနည်းအများ
အပေါ် တည်မှီလျက် ကိုးကွယ်ပုံ အနေအထားချင်း မတူညီကြပါ။ မိမိအိမ်တွင် သက်ရှိထင်ရှား ဘု
ရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင် သီတင်းသုံး စံပယ်တော်မူသကဲ့သို့ ရိုရိုသေသေ ကြည်ညို
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:06 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၃) ။
“ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ဆုံးမစာ (၂) ”
၁၂။ ရိုင်းစိုင်းနီးကပ်၊ မကိုင်းညွတ်ပဲ
၁၃။ စားဖွယ်စားရာ၊ ကပ်သောခါလည်း
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:03 AM No comments:
ဆရာတော်ဦးဝီရသူပြောတဲ့ ဖြူစင်မြတ်နိုး ကိုးခြောက်ကိုးအကြောင်း
(၉၆၉) ဂဏန်းသုံးလုံးတွင် ပထမ(၉)သည် ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါးကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဒုတိယ ဂဏန်း(၆)သည် တရားဂုဏ်တော် (၆)ပါးကို ရည်ညွှန်းသည်။
တတိယ(၉)သည် သံဃာ့ဂုဏ်တော် (၉)ပါးကို ရည်ညွှန်းသည်။
ပူသည့်မျက်နှာ မှ အေးသည့် မျက်နှာသို့။
မျက်နှာ က သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပူသည့် မျက်နှာရယ်၊ အေးသည့် မျက်နှာရယ် မပူမအေး မျက်နှာ ရယ်ပါ ။ တစ်ချို့များ မျက်နှာ မြင်လိုက် ရရင်ပဲ သူ့မျက်နှာမှာ အအေးဓတ်က အထင်းသား ပေါ်နေတာပါ။
မျက်နှာက ကြည်နေတာပါ။ သူတင်လား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်ရတဲ့ သူရဲ့ရင်ကို အေးသွားတာပါ။
မည်သူမဆို ဘ၀တွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများသည်လည်း များပြားလာနေမည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုအတွေ့အကြုံများတွင် အကောင်းများရှိသကဲ့သို့ အဆိုးများလည်း ရှိတတ်၏။
စိတ္တံ နဿ ယကမ္ပတိ
အသောကံ ၀ိရဇံ ခေမံ
သိလျက် အပြစ်ကျူးလွန်သူနှင့် မသိ၍ အပြစ်ကျူးလွန်သူ မည်သူက ပိုအပြစ်ကြီးသနည်း...
မကောင်းမှုအကုသိုလ် တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရာတွင် အပြစ်ရှိမှန်းသိလျှက် ကျူးလွန်သူနှင့် အပြစ်ရှိမှန်းမသိ၍ ကျူးလွန်သူ မည်သူက ပိုပြီးအပြစ်ကြီးပါသနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။ ဦးတင်ပါတယ်ဘုရား။
ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲ…
ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လို ကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲဘုရား။
သီလရှင်ကို ယောက်ျားများက ရှိခိုးကောင်း၊ မကောင်း… သီလရှင်ကို တပည့်တော်ဟု သုံးသင့်၊ မသုံးသင့်..?
သီလရှင်ကို တပည့်တော်တို့ ယောက်ျားများက ရှိခိုးကောင်းပါသလားဘုရား…။ သီလရှင်နှင့် စကားပြောတဲ့အခါ တပည့်တော်လို့ သုံးသင့်သလား၊ ကျွန်တော်စသည်ဖြင့် သုံးသင့်သလား သိချင်ပါသည်ဘုရား…ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား…
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးများသည် ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ကြပါသည်။ ကံသာအမိ
ကံသာအဖဟုပင် သိထားကြပါသည်။ မိမိပြုသောကံသည် မိမိကို ပဋိသန္ဓေစိတ်ရင်းကပင် ကွဲပြား
အောင် ပြုရုံသာမက ရုပ်အဆင်း ကွဲပြားအောင်၊ အမျိုးအဆွေ ကွဲပြားအောင်၊ ချမ်းသာဆင်းရဲ ကွဲ
ပြားအောင်လည်း မိမိကံကပင် မိမိကို စီမံလိုက်ပါသည်။
“ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ဆုံးမစာ (၁)
၁။ တိလောကဟု၊ မရနှိုင်းတူ
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ (၁၀၈) ကွက် “ စက်လက္ခဏာတော် ” အကြောင်း သိကောင်းစရာ။
မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေဖ၀ါးတော်နှစ်ပြင်၌ (၁၀၈)ကွက်စီသော စက်လက္ခဏာတို့သည် ထင်ကုန်၏။
ထို(၁၀၈)ကွက်သော လက္ခဏာတော်တို့သည် လောကသုံးပါးကို သရုပ်ဖေါ်၍ တည်ကုန်၏။ ၎င်း(၁၀၈)
ကွက်တို့တွင် ဩကာသလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ အကွက်ပေါင်း (၅၉) ကွက်၊ သတ္တလောကကို သရုပ်
၍ (၂၁) ကွက်နှင့် သင်္ခါရလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ (၂၈) ကွက်ရှိကုန်၏။ သဘောကား လောကသုံးပါး
လောကရှိ အများစုသော လူသားတို့သည် ချမ်းသာနှင့် ဆင်းရဲ မကွဲပြားကြပါ။ ယင်းသို့ မကွဲပြားကြ၍ ချမ်းသာကို ဆင်းရဲထင်ကာ ရှောင်ရှားနေကြပါသည်။ ဆင်းရဲကိုမူ ချမ်းသာထင်ကာ ကြိုးစားရှာဖွေ ကျင့်သုံးနေကြပါသည်။
“အရှုံးပေးခြင်းနဲ့၊ အလျော့ပေးခြင်းက မတူပါဘူး”။
ဟုတ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးတာနဲ့ အလျော့ပေးတာ လုံးဝမတူပါဘူး။ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုိုအပ်ရင် အနုိုင်မယူဘဲ၊ နုိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ဘဲ အလျော့ပေးသင့်ရင် ပေးရာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကုိုယ့်ဘဝအတွက် ရှုံးနိမ့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိသွားအောင် အလျော့ပေးလုိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကုိုယ့်လောက်အဆင်မပြေသူတွေ၊ ကုိုယ့်အောက်နိမ့်ကျသူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆုိုင်ရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
အယူထွေပြား၊ ထုိုသူများအား၊ ပြစ်မှားစိတ်မှာ၊ မရှိရာဘူး။
ကိုယ့်အောက်တန်းတူ၊ အထက်သူဟု၊ မှတ်ယူမြဲသို၊ သုံးပုဂ္ဂိုလ်တွင်
အောက်ကိုသနား၊ တန်းတူအားမူ၊ မြှောက်စားအမျှ၊ မယုတ်ချနှင့်၊ ထက်ကသူမှာ၊ ရိုသေရာ၏။
လောကမှာ မိတ်ဆွေကောင်း ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ မိတ်ဆွေကောင်းအထဲမှာ မိတ်ဆွေ
မဟုတ်ဘဲနဲ့ မိတ်ဆွေယောင် ထင်နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက လေးမျိုးရှိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက
သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်မှာ သင်္ဂါလသတိုးသားကို ဆုံမသြ၀ါဒ ပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောထားပါတယ်။
၁။ အညဒတ္ထုဟရ= ကိုယ့်ဘက်က တစ်ဖက်သတ် ကိုယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထံက ဘာပဲ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:23 AM 1 comment:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:17 AM No comments:
သာသနာအတွက် ရင်လေးစရာကောင်းသည့် ကြည်ညိုဖွယ် ဟန်ဆောင်မှုများ။
မရှိ၊ ဒကာ၊ ဒကာမတွေက သိသလိုလိုနဲ့ ...အဲဒီ ဆရာတော်ကြီး တရားရှိတယ်ကွဲ့ ..လှုပ်ကိုမ
လှုပ်တော့ဘူး အချိန်မရွေး သွားကြည့်သွားကြည့် ငြိမ်နေတာဘဲလို့ ..ကိုယ့်အထင်နဲ့ ကိုယ်
လူတွေက ပြောနေကြတာ ရင်လေးစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးတာနဲ့ အလျော့ပေးတာ လုံးဝမတူပါဘူး။ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုိုအပ်ရင် အနုိုင်မယူဘဲ၊ နုိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ဘဲ အလျော့ပေးသင့်ရင် ပေးရာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းလည်း ကံ၊ ကောင်းလည်း ကံဟု ယူဆကြသူများ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ မဟာမေဒင်ဘာသာတို့၌ သတ္တ၀ါတို့၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို
ထာဝရဘုရားသခင် စသည်တို့က ဖန်ဆင်းပေးသည်ဟု ဖန်ဆင်းပေးသူကို စွဲလမ်းကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့က “ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို ရှေးကပြုခဲ့သော ကံ(အပြုအမူ)
က စီမံပါ၏။ ဟု ရှေးကံကို စွဲလမ်းကြ၏။ ” အရာရာ၌ ကံကိုချည်း စွဲလမ်းသူများလည်း “ ပုဗ္ဗေ
ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၇)။
ရဟန်းဝတ်မည်ဆိုလျှင် ဆရာတော်များ ဆုံးမထားသော"ရှင်ချောင်သေကြပ်၊ရှင်ကြပ်သေ ချောင်" ကိုလေ့လာပါ။ လိုက်နာပါ။
သာသနာတော်၌ ဆရာတော်များ ဆုံးမထားသော စကားတစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ
"ရှင်ချောင်သေကြပ်၊ ရှင်ကြပ်သေရှောင်" ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရဟန်းဝတ်ပြီး
သီလသိက္ခာပုဒ်များ မစောင့်ထိန်းဘဲ၊ သွားကာ၊ လာကာ၊ စားကာ၊ သောက်ကာနှင့် ရဟန်း
စဉ်က ချောင်ချောင်ချိချိနေလျှင် သေလျှင်ငရဲကျမည်ဖြစ်၍ အသေကြပ်မည်။ ရဟန်း
ဓမ္မကထိက ဝေါဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလရဲ့ တရားခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ကြိုက်လွန်းလုို့ ကုိုယ့်ဘဝနဲ့ချိန်ထိုးထားတဲ့ အတွေးလေးတွေကို စာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ရေးထုတ်ဖြစ်တယ်လုို့ပဲ ဆုိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် အသက် (၃ဂ)နှစ်ပြည့်ကာ (၄၀)နားကို တဖြည်းဖြည်းကပ်လာတဲ့ ဘဝရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကို စဉ်းစားရင် လေးဆယ်ကျော်လာရင် ဘဝကို ဘယ်လုိုဖြတ်သန်းမလဲ၊
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်လေး တွေနောက်ဘ၀ကောင်း အောင်ကုသိုလ်ပြုရမရ...?
မေး။ Thet Lay (https://www.faceboo k.com/thet.hlaing.9)
အရှင်﻿ဘုရား ရှိခိုးကန်﻿﻿တော့ပါတယ်﻿ဘုရား။ အချိန်﻿ရရင်﻿ တခု﻿လောက်﻿﻿ဖြေကြား﻿ပေးပါ။ ရင်﻿ထဲမှာ ﻿သိချင်﻿စိတ်﻿ဖြစ်﻿လာလွန်းလို့ပါဘုရား။ အမှားပါရင်﻿ ခွင့်﻿လွတ်﻿ပါ။ တပည့်﻿﻿တော်မတို့အိမ်﻿မှာ ﻿မွေးထားတဲ့နွားနှစ်﻿﻿ကောင်﻿က အ﻿ဖေက﻿ရောင်းထုတ်﻿ပစ်﻿လိုက်﻿တယ်﻿လို့ ခုပဲသိရပါတယ်﻿ဘုရား။
"ဥုံ" ပါသော ဂါထာကို ရွတ်ဆိုသူတို့၏ အရေအတွက်လည်း နည်းဟန်မတူပါ။
အစဉ်အလာအရဆိုသလိုပင် "ဥုံ" ပါသောဂါထာများကို ရွတ်ဆိုခဲ့သည်မှာ
ပိဋကသုံးပုံ နှုတ်ငုံဆောင် တိပိဋကဓရဆရာတော်
(၀ိသိဋ္ဌတိပိဋကဓရ မဟာတိပိဋကကောဝိဒ၊ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍဂါရိက၊
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘဓိဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက)၊
မျက်လှည့်သမားသည် ကျောက်ခဲကို ကောက်၍
ဤမာယာကလည်း လူတစ်ဖက်သား အထင်မှားအောင်
ရှေးသရောအခါ ရွာတစ်ရွာ၌ ဒါယကာတစ်ယောက်ကိုးကွယ်ထားသော
ရသေ့တစ်ဦးရှိလေသည်။ ခိုးသူဘေးကြောင့် ရွှေစင်နိက္ခတစ်ရာကို
“အရှင်ဘုရား၊ သတိပြုလိုက်ပါ” ဟု မှာထားသောအခါ
တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ဘု...
ဆရာတော်ဦးဝီရသူပြောတဲ့ ဖြူစင်မြတ်နိုး ကိုးခြောက်ကု...
သိလျက် အပြစ်ကျူးလွန်သူနှင့် မသိ၍ အပြစ်ကျူးလွန်သူ မ...
ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြ...
သီလရှင်ကို ယောက်ျားများက ရှိခိုးကောင်း၊ မကောင်း… သ...
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ (၁၀၈) ကွက် “ စက်လက္ခဏာတော် ” အြေ...
သာသနာအတွက် ရင်လေးစရာကောင်းသည့် ကြည်ညိုဖွယ် ဟန်ဆောင...
ရဟန်းဝတ်မည်ဆိုလျှင် ဆရာတော်များ ဆုံးမထားသော"ရှင်ခေ...
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်လေး တွေနောက်ဘ၀ကောင်း အောင်ကုသိုလ်ြ...